हामी निरन्तर, आजको समाजमा कुराकानी तर्क, प्रश्न उत्तर प्राप्त गर्नुहोस्। सबै समस्या र चुनौतीहरू सुलझाने को लागि एक उपकरण - यो संवाद थियो। त्यहाँ एक जो तपाईं विषय तिर आफ्नो मनोवृत्ति परिवर्तन र अर्को समाधान गर्न धक्का गर्न interlocutor प्रभावित प्रयोग गरेर, प्रविधी र विधिहरू संख्या हो। जवाफ एउटा प्रश्न एउटा प्रश्न - मनोवैज्ञानिक प्रभाव तरिका को छ। यसलाई दैनिक जीवनमा, व्यापार मा, वार्ता मानिसलाई साँचो अनुहार खोल्न र आफ्नो मनसाय सिक्न प्रयोग गरिन्छ।
सहज परहेज प्रतिक्रिया
केही मानिसहरू स्वागत काउन्टर प्रश्न प्रयोग भन्ने महसुस छैन। सायद तिनीहरूले कसरी जवाफ थाहा छैन, वा मजाक गर्न प्रयास। सोधे छ प्रश्न गलत वा अस्पष्ट, त्यसपछि एउटा प्रश्न-अद्यावधिक प्रयोग हुँदा क्षणमा छन्। कसैले प्रश्न सोध्न र जानकारी स्पष्ट गर्न चाहनु विषयमा पोख्त छैन। तर जवाफ अर्को प्रश्न छ - यो सधैं एक क्रोध उत्पन्न हुन्छ।
जानिजानि परहेज प्रतिक्रिया
विचारशील कदम र polemical चाल एक प्रकारको - मनोवैज्ञानिक को लागि, राजनीतिज्ञ र शिक्षित मान्छे एउटा प्रश्न एउटा प्रश्नको जवाफ। जानकारी मुद्दाहरू पत्ता लगाउन व्यवहारकुशल नभएको, अशिष्ट प्रयास कौशलतासाथ कुराकानीमा को धेरै सुरुमा यी मानिसहरूले दबेको टाउको।
मान्छे किन प्रश्न एउटा प्रश्नको जवाफ गर्छन्? जवाफ सरल छ। यस क्रममा हुन्छ:
- कुराकानीमा पहल र नेतृत्व जफत;
- शक्ति प्राप्त गर्ने interlocutor भन्दा;
- एक प्रतिद्वन्द्वीको व्यवहारलाई manipulating;
- व्यक्तिगत राय को कर।
कसले प्रश्न बेवास्ता गर्न उपकरण प्रयोग?
गर्नेहरूलाई प्रश्न एउटा प्रश्नको जवाफ, उत्तर र provocation जोगिन चाहन्छौं। यस वार्ता, भाषण, सोधेर मा विवादहरु र तर्क मा उत्तेजक प्रश्न, अनपेक्षित स्थिति मा interlocutor राख्न। तपाईं पनि धेरै भने छैन द्रुत मानसिक प्रतिक्रिया छ गर्न आवश्यक छ।
उदाहरण प्रतिक्रिया प्रश्न निम्न समावेश हुन सक्छ:
- तपाईं किन रुचि राख्नुहुन्छ?
- तपाईं किन यति लाग्छ?
- तपाईं यो शङ्का छ?
- तपाईं कसरी लामो रुचि छ?
पहिलो बैठक वा प्रेम समयमा केही मानिसहरू उमेर, वैवाहिक स्थिति, ज्याला, काम र व्यक्तिगत क्षण बारेमा अनावश्यक प्रश्न। सबै उपस्थिति, वजन, पारिवारिक समस्या बारे प्रश्न सोध्न लागि साथी वा परिचितहरू (जसलाई तपाईंलाई विवादित सम्बन्ध) विशेष छन्। यसलाई चाँडै एक witty जवाफ पाउन वा अवस्था मरेको अन्त मा तपाईं राख्न गर्छ भनेर, अर्को प्रश्न सोध्न मनमोहक छ।
सबै भन्दा राम्रो रक्षा - आक्रमण
एउटा प्रश्न एउटा प्रश्नको जवाफ - provocation, आक्रमण र अप्रिय विषय परिवर्तन वा कुराकानीमा अन्त छिटो तरिका को सुरक्षा हो। Competently र भद्रताका साथ एक सहयोगी वा मित्र बन्द fending, तपाईं आफ्नो मूल्य र लगनशील भई लागिरहेमा देखाउँछ।
चर्चा अन्तर्गत विषय लागि धेरै अप्रिय छ भने पनि, तपाईंले गम्भीर वा maliciously जवाफ पनि कडा प्रतिक्रिया हुँदैन। आफ्नो कैफियत चोट र कमजोर छ कि यस्तो प्रतिक्रिया मात्र आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको देखाउनेछ।
एक अप्ठ्यारो स्थिति बाहिर प्राप्त गर्न, तपाईंले अग्रिम मुश्किल प्रश्नहरूको जवाफ को एक श्रृंखला तयार गर्न आवश्यक छ। पनि सबैभन्दा brusque प्रश्न भद्रताका साथ र मर्यादा संग जवाफ हुनुपर्छ।
तर आफ्नो साझेदार chutzpah लिन्छ भने, तपाईं सधैं च्याट वाक्यांश प्रयोग रोक्न सक्नुहुन्छ:
- तपाईं चिन्तित छैनन्;
- म यो बारेमा कुरा गर्न चाहँदैनन्;
- कृपया मलाई एक्लै छोड्न।
साथै, तपाईंले सधैं मान्छे अत्यधिक जिज्ञासा exhibiting गर्न चेतावनी हुन र धेरै प्रश्नहरू सोध्छन् गर्नुपर्छ।
मनोवैज्ञानिक मा साधारण जीवन परिस्थिति को interlocutor प्रभावित र उत्तर उम्कन गर्न, विषय परिवर्तन अभ्यास गर्न सल्लाह। तपाईं काम गर्न यो विधि लागू गर्न, आफ्नो नातेदार र साथीहरू प्रयास सही समयमा गर्न सक्नुहुन्छ, वा संघर्ष सामना।
भावना - यो अन्त छ।
आफ्नो घर मा पार्टी विद्यार्थी। कसरी उच्चतम स्तर मा यो खर्च गर्न?
गाउँमा Sedov (को Azov सागर) मा छुट्टी। पेंशन्स र आकर्षण
फलाम gluconate: हानि विवरण, समीक्षा
Skeptic - एक शङ्का सबै एक व्यक्ति वा शोधकर्ता?